နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်ရန်နှင့် အာရှ-ပစိဖိတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် နီပေါနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ | NLD
Home State Counsellor နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်ရန်နှင့် အာရှ-ပစိဖိတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် နီပေါနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၉
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် H.E.Mr. K.P.Sharma Oli ၏ ဖိတ်ကြား ချက်အရ နီပေါနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက်ရန်နှင့် “အာရှ-ပစိဖိတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၂၀၁၈´´ သို့တက်ရောက်ရန် ယနေ့နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် အထူး လေယာဉ်ဖြင့် နေပြည်တော်မှ ထွက်ခွာသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အား နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်နှင့် ဇနီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နီပေါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံနှင့် တာဝန်ရှိသူများက နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက် ကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသူ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးအောင်ထူး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါသွားကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ တရားဝငျခဈြကွညျရေးခရီး သှားရောကျရနျနှငျ့ အာရှ-ပစိဖိတျ ထိပျသီးအစညျးအဝေးသို့ တကျရောကျရနျ နီပေါနိုငျငံသို့ ထှကျခှာ
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ နီပေါဖကျဒရယျ ဒီမိုကရကျတဈ သမ်မတနိုငျငံ ဝနျကွီးခြုပျ H.E.Mr. K.P.Sharma Oli ၏ ဖိတျကွား ခကျြအရ နီပေါနိုငျငံသို့ တရားဝငျခဈြကွညျရေးခရီးသှားရောကျရနျနှငျ့ “အာရှ-ပစိဖိတျ ထိပျသီးအစညျးအဝေး ၂ဝ၁၈´´ သို့တကျရောကျရနျ ယနနေံ့နကျ ၉ နာရီ မိနဈ ၂ဝ တှငျ အထူး လယောဉျဖွငျ့ နပွေညျတျောမှ ထှကျခှာသညျ။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ့ဆှေ၊ နပွေညျတျောကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာမြိုးအောငျနှငျ့ ဇနီး ၊ မွနျမာနျိုငျငံဆိုငျရာ နီပေါဖကျဒရယျဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံ သံရုံးယာယီတာဝနျခံနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက နပွေညျတျော အပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျ၌ ပို့ဆောငျနှုတျဆကျ ကွသညျ။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့အတူ ပွညျထောငျစု အစိုးရအဖှဲ့ရုံးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးမငျးသူ၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ၊ စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျး ရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဦးအောငျထူး၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမှ တာဝနျရှိသူမြား လိုကျပါ သှားကွသညျ။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ ကျင်းပသည့် K-Wind Soul Beat ကိုရီးယားရိုးရာ အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲသို့ တက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေး